Iibhanti zewrist zensimbi, iingqekembe zensimbi, iiPatch ezenziwe siko-SJJ
Ngendawo yokuvelisa ngaphezulu kwe-64,000 yeemitha zesikwere kunye nangaphezulu kwama-2500 abasebenzi abanamava, kunye nesityalo esizenzekelayo sokwenza umbane kunye noomatshini bokuhambisa imibala yoqweqwe, siyabadlula abo sikhuphisana nabo ngokusebenza okuphezulu, ingcali, ukunyaniseka kunye nomgangatho ophezulu wemveliso, ngakumbi ngobuninzi obufunekayo kungekudala okanye uyilo olunzima lufuna abasebenzi abanamava. Ukuzinikezela kulawulo olungqongqo lomgangatho kunye nenkonzo yabathengi enolwazelelelo, abasebenzi bethu abanamava bahlala bekhona ukuxoxa ngeemfuno zakho kunye nokuqinisekisa ukoneliseka ngokupheleleyo kwabathengi.
2021 / Agasti
I-alloy ye-Zinc yinto eguquguqukayo ngakumbi enomda omncinci, xa kuthelekiswa nezikhonkwane ze-enamel zobhedu, izifanekiselo ze-zinc alloy kunye neebheji zibiza kakhulu ingakumbi xa ubungakanani beodolo bukhulu okanye ubungakanani bepini bukhulu. Kuba ubukhulu zinc zinc ingxubevange enkulu, kunokuba thinner kunye les ...
Ngaba ungathanda ukwenza amakhubalo esinyithi akumgangatho ophezulu kwizixhobo zakho? Nceda yiza uze usijoyine, Izipho eziMnandi eziKhazimlayo ziya kuwuzalisekisa umnqweno wethu kwaye zizise umbono wakho kubomi bokwenyani. Sinikezele ngoyilo olukhulu oluvulekileyo lwezacholo zomqala ezihonjisiweyo, iintsimbi ezinomtsalane, umtsalane wezilwanyana, umhombiso weKrisimesi ...